Ukuseta iMpumelelo yokuThengisa ngo-2017 | Martech Zone
Ngelixa ixesha leKrisimesi lisenokuba liqhubeka, imibutho yabasebenzi icwangcisiwe kwaye iipayi zokwenza imijikelezo yeofisi, eli ikwalixesha lokucinga ngaphambi kuka-2017 ukuqinisekisa ukuba kwiinyanga ezili-12, abathengisi bazakube bebhiyozela impumelelo bayibonile. Nangona ii-CMO kwilizwe liphela zisenokuba ziyaphefumla emva komceli mngeni ka-2016, ngoku ayiloxesha lokuba ungakhathali.
Kunyaka ophelileyo, sizibonile iingxilimbela zeetekhnoloji zahlukahlukana kwiminikelo yazo, njenge UberEats, KwiAmazon Ivenkile yeencwadi kwaye iapile ukulahla i-headphone jack, zonke ezinyanzelise amashishini ukuba acinge ngendlela nabo abanokuthi bavele ngayo. Ukubeka phezulu kuluhlu lwezona zihloko zixutyushwayo kubeyinyani eyi-Virtual, automation kunye ne-ethos yokuqalisa yokucela umngeni kwesiqhelo.
Ukulandela ezi zigqibo ziphezulu zeshishini kunye neendlela ezintsha, iinkokheli zeshishini ziye zanyanzeliswa ukuba zibuze ukuba loluphi uhlobo lotshintsho ekufuneka bacinge ngalo. Ngoku lixesha lokuba abathengisi baqwalasele ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka bewathathe ukuqinisekisa amava asisiseko kubathengi kwi2017.
Ukuba izigqibo zeshishini ezithathwe ziimpawu ezinkulu zisibonisile nantoni na kulo nyaka, kukuba umthengi ngundoqo. Okokuqala nokuphambili, abathengisi ngokuqinisekileyo kufuneka babe nale ngqondo kutyalo-mali ngalunye ku-2017. Kufuneka bacinge malunga nomxholo abathengi babo, into abazakuzibandakanya nayo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, bangathanda ukufumana lo mxholo. Ngokujonga indlela abanokunxibelelana ngayo nabathengi ngcono, ishishini limi ukuze lifumane abantu.
Ukwenza iMfono phambili
Olona hlobo kuphela lokuzibandakanya nabathengi namhlanje kukufikelela kubo ngeendlela abazisebenzisa rhoqo. Ngama-80% abantu abadala base-UK abane- smartphone Akumangalisi ukuba uninzi lwamashishini esi sisixhobo esiphambili ukufikelela kumsebenzisi wakho wokugqibela. Nangona kunjalo, sothuswe kukufumanisa kutshanje Ukuphazamiseka kwidijithali Xela ukuba i-36% yamashishini asenayo iwebhusayithi ehambayo. Ngoku lixesha lokuba abathengisi baqinisekise ukuba abaphoswa kukunganikezeli ngenketho ephathekayo, ngelixa abo sele benendawo eneselfowuni kufuneka bajonge ukuba ukubonelela kwabo kusebenziseka lula ngangokunokwenzeka.
Indawo ehambayo kufuneka iphathwe ngokubaluleka okufanayo nedesktop. Kufuneka kube lula ukuhamba, nazo zonke izinto ezifumaneka kwidesktop, kwaye akufuneki ukuba zixinaniswe okanye kube nzima ukuyiqhuba. Oku kufuna iimenyu ezijikelezayo, ii icon, kunye neebar zesixhobo ezithandekayo emehlweni. Ezi zinto kufuneka zifaniswe nolungelelwaniso olusengqiqweni kunye nolwimi olufutshane ukuze indawo ephathekayo ibetha, kodwa ikwacoleke
U-2016 ulahle ubuninzi beetekhnoloji ezintsha kunye neendlela zethu zokwenza amashishini ukuba aziqwalasele. Nangona kunjalo, ukungena kunyaka omtsha, abathengisi kufuneka balumke bangatyali itekhnoloji ngenxa yetekhnoloji. Ngama-36% athe awethu Ukuphazamiseka kwidijithali ingxelo bayakholelwa ukuba ishishini labo lifuna ukutyala imali ngakumbi kwidijithali ukuyila, kubalulekile ukuba olu tyalomali lwenziwe emva kophando olunzulu xa ishishini linezakhono zokwandisa utyalo-mali kwaye kuphela xa imeko yokwenyani ichongiwe.
Khuphela iNgxelo yeDijithali yokuPhazamisa
Ngaphandle kwale meko yokucinga, umngcipheko kwishishini lokuchitha imali kwinto abangenako ukuyigcina ngaphakathi endlwini. Umzekelo, 53% yabathengisi Yamkela ukusokola ukusebenzisa isoftware yokuthengisa oomatshini ngaphaya kotyalo mali lokuqala. Ukongeza, ibango elivela kumthengi kufuneka libekhona. Ukuba abanamdla wokwamkela itekhnoloji entsha yokunxibelelana nophawu lwakho, iya kuba kukuchitha imali.
Ukuze ungene kwi-2017 ngesicwangciso esomeleleyo sedijithali, abathengisi kufuneka bathathe onke la manqaku athathele ingqalelo. Ukugcina umthengi entliziyweni yazo zonke izigqibo, ngelixa uvavanya rhoqo ixabiso elinokuza neendlela ezintsha kunye neetekhnoloji, oko kuthetha ukuba iinkampani zinokwakha ubudlelwane obomeleleyo nomsebenzisi wazo, kwaye ekugqibeleni ziqinise ukuthembeka kwebrendi.
tags: 20162017umthengiUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiuk
Ngomhla wama-20 ku-Disemba 2016 ngo-9: 57 PM
Iposti eyoyikekayo! Enkoso ngokwabelana.